Wednesday December 09, 2015 - 10:37:47 in Articles by Super Admin
Goobaha argagixisadu bartilmaameedsaneyso ayaa la sheegay iney ka mid yihiin Beerta Nabadda oo ku taal dhabarka dambe ee Hotel SYL , The Village Restaurent,Hotel Afrik oo ku yaal KM4,Ajabka haamaha Shidaalka Muqdisho, Deva Hospital,Garoonka Diyaaradaha Muqdisho iyo goobaha Waxbarashadda Turkiga sida Dugsiga Farsamadda gacanta oo hadda loo bixiyay NILE ACEDAMY.
Qof naftii hure ah oo magaciisa lagu koobay Abu Mohamed ayaa Video dardaarana looga duubay gobolka Shabeeladda hoose,sida ay Waagacusub u xaqiijiyeen hoowl wadeeno ka tirsan Waaxda Warfaafinta Al-Shabaab ee Alkataib.
Naftii huraha ayaa la sheegay inuu hadalkiisa ku sheegay inuu isku qarxin doono Maqaayad la yiraa The Village oo ku taal Muqdisho gaar ahaan agagaarka guriga hooyooyinka.
Naftii hurre kale ayaa la sheegay iney argagixisadda Al-Shabaab u diyaariyeen Maqaayad ku taal Xeebta Liido oo lagu magacaabo Beach View.sidoo kalena waxaa dhici kara iney weeraro la beegsadaan Maqaayadda Sea Food
Sarkaal ka tirsan garab ka go-ay Al-Shabaab oo doonaya inuu ku biiro Daacish ayaa sheegay in goobaha la qorsheeyay ay sidoo kale ka mid yihiin Diplomat Hotel iyo Hotel SYL.
Al-Shabaab waxeey bartilmaameedsadaan Xarumaha ganacsiga ee aan bixin Canshuurta ay ula baxeen Zakadda ,sidoo kalena Xildhbaanadda iyo shaqaalaha Dowladda waxeey ka qaadaan bil walba lacag guno ah taas oo ay iska dhiibaan marka ay mushaarka qaataan.
Sarkaalka Al-Shabaab ka goostay wuxuu sheegay in Degmadda Xarardheere lagu diyaarshay Laba kamida Doomaha dheereeya kuwaas oo la qorsheeyay iney weerar dhinaca badda uga qaadaan Garoonka Diyaaradaha Muqdisho ,Xeradda Xalane iyo Xeebta Liido.
Al-Shabaab oo burbur iyo khilaaf xoogan uu niyad jibiyay waxeey ku jiraan rafashadii ugu dambeeysay taas oo muhiima in feejignaan balaaran laga sameeyo si aysan u galaafan nolosha boqolaal qof oo aan waxba galabsan.
Sikastaba ha ahaatee ,Cabsi weyn ayaa laga dareemayaa Muqdisho ,iyadoo xalayba dad badan ay ka guureen Hotel Afrik.